Jigsaw Puzzles Epic 1.4.6 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.4.6 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
ဂိမ္းမ်ား ပေဟဠိ Jigsaw Puzzles Epic
Jigsaw Puzzles Epic ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Jigsaw ပဟေဠိက Epic အမျိုးအစားမျိုးစုံအတွက် 10000 ကျော်လှပသောရုပ်ပုံများနှင့်အတူတစ် jigsaw ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်ပုံကနေပဟေဠိဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေး app ကို jig လွှပဟေဠိ၏မိတ်ဆွေတို့ကိုအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Jigsaw ပဟေဠိက Epic သင်တို့အပေါင်းကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဆိတ်ငြိမ်ရာမှယခုနှစ်ရာသီနှင့်ကမ္ဘာ၏အံ့ဘွယ်သောအမှုကိုခံစား, ညားရှုခင်းများကိုကြည့်ပါ, အားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသွားလာနိုင်ပါတယ်။
• 250 ကျော်ကွဲပြားခြားနားသောအထုပ်ထဲမှာ 10000 ကျော်ဆင်းလှသောအစ်မ, HD ကိုဓာတ်ပုံတွေ,!
• 11 အခက်အခဲ setting များကို: 625 အပိုင်းပိုင်းအထိ!
• 1080p HD Graphics ။
Jigsaw Puzzles Epic အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Jigsaw Puzzles Epic အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Jigsaw Puzzles Epic အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Jigsaw Puzzles Epic အား အခ်က္ျပပါ
mr-robot-games စတိုး 6.79k 12.29M
Jigsaw Puzzles Epic ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Jigsaw Puzzles Epic အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.4.6
ထုတ်လုပ်သူ Kristanix Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.kristanix.com/privacy/
Release date: 2019-07-08 23:52:23
လက်မှတ် SHA1: D9:46:1A:BB:1A:75:F3:1F:68:BB:C1:ED:13:44:DC:EC:C4:D3:13:CD
အဖွဲ့အစည်း (O): Kristanix Games
Jigsaw Puzzles Epic APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ